Tetikasa Ambatovy: hiverina hisokatra afaka volana vitsy ny fitrandrahana | NewsMada
Herintaona mahery izao ny nanendrena ny SEM. Higuchi Yoshihiro ho masoivohon’i Japana hiasa eto Madagasikara sy ny Nosy Kaomoro. Anisan’ny notsidihiny ny orinasa Ambatovy, satria manana petrabola be indrindra ao ny orinasa japoney, Sumitomo (55%).
Fampiasam-bola lehibe indrindra aty Afrika ny tetikasa Ambatovy. Nilaza ny masoivohon’i Japana, miasa eto amintsika, SEM. Higuchi Yoshihiro, fa tsy maintsy atao ny fiaraha-miasan’ny rehetra mba hisian’ny fahombiazana, hisintonana ny mpampiasa vola vahiny hafa ihany koa ho avy aty Madagasikara. Nambarany koa fa amin’ny maha ambasadaoro azy, hiara-kiasa hisy koa ny fiaraha-miasa amin’ny masoivoho hafa, hametraka tontolo tsara hampahomby ity tetikasa goavana iraisam-pirenena ity, ahazoan’ny rehetra tombontsoa, indrindra ny vahoaka Malagasy sy ny governemanta eto an-toerana. Notsiahiviny fa manan-danja lehibe eo amin’ny toekaren’i Madagasikara ny tetikasa Ambatovy, izay manome asa mivantana maherin’ny 9.000, sady mampidi-bola vahiny avy amin’ny fanondranana ny vokatra any ivelany.
Manantena ny fanohanan’ny rehetra
Etsy an-kilany, nilaza ny filoha lefitra misahana ny fampandrosoana maharitra ao amin’ny Tetikasa Ambatovy, i Philippe Beaulne, fa “tsy mbola voafaritra mazava ny hisokafana indray ny orinasa”. Na izany aza, nambarany fa efa miantso tsikelikely ireo mpiasa eto an-toerana sy any ivelany izy ireo amin’ny fikojakojana ny fitaovana izay tena saro-pady tokoa. Nanome toky kosa anefa izy fa fa hiverina hamokatra afaka volana vitsy, ary manantena ny fanohanan’ny rehetra.
Nomarihiny koa fa manodidina ny 220 tapitrisa dolara ny fividian’Ambatovy entana sy fahazoana servisy (tolotrasa) any amin’ireo orinasa eto Madagasikara, toy ny any Toamasina, Moramanga, Antananarivo, sns. Manodidina ny 7.000 isan-taona ny fampiofanana arak’asa omen’ity orinasa ity.
Anisan’ny notsidihin’ny ambasadaoro koa ny fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina, vatsin’ny Fiaraha-miasa japoney ho an’ny fampandrosoana (Jica).